Quick-witted Wheel of Fortune contestant wins featured trip to Nevis | Saint Kitts and Nevis travel news
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » Ivili elikhawulezileyo levili lomncintiswano liphumelele uhambo oluya eNevis
Ivili elikhawulezileyo levili lomncintiswano liphumelele uhambo oluya eNevis
Igunya lezoKhenketho laseNevis laqala phantsi ukuqala imizamo yalo yokuthengisa ngo-2021 ngokuthi liboniswe kwiVili leThamsanqa ngoDisemba 30, 2020. Uhambo olumangalisayo oluya eGolden Rock Inn kwisiqithi esihle kakhulu yayingumvuzo weholide omkhulu kumdlalo wesine womdlalo usuku. U-Lawrence Forbes, osebenza kwiSithili seSikolo sase-San Francisco United kwaye eyi-alum yeSan Francisco Gay Men's Chorus, ukhusele uhambo lweholide oluxabisekileyo oluya eNevis ngenqaku elithi "Iindawo" xa esombulula igama elibizwa ngokuba yi-SUN DRENCHED BEACHES, elichaza ngokugqibeleleyo ukusinda kwesi siqithi. Nangona engakhange afikelele kumjikelo wokugqibela, uMnu Forbes wemka ephethe imali kunye nebhaso elixabise i $ 14K.
IGolden Rock Inn, into entle enamagumbi alishumi elinanye okusondelelana kwigadi entle, ngobubele inikezela ngobusuku obu-6 bokuhlala, kubandakanya isidlo sakusasa, iWIFI yasimahla kunye neenkonzo zokuhlamba. IGunya lezoKhenketho laseNevis libonelele ngeendlela ezimbini zohambo lwenqwelomoya eForbes kunye nendwendwe lakhe ukugqibezela ibhaso lokuwongwa. Ixabiso elipheleleyo lohambo li- $ 7,000.
Ivili leThamsanqa, ngoku lineminyaka engama-38th ixesha, lelona xesha lide libalekileyo lomdibaniso womdlalo kamabonakude waseMelika. Umndilili wababukeli abazizigidi ezisibhozo kumdlalo ngamnye wokubukela umamkeli odumileyo uPat Sajak kunye nomnxibelelanisi uVanna White beveza ukhuphiswano oludumileyo, apho abathathi-nxaxheba basombulula iipuzzle zamagama kwaye baphumelele imali kunye namabhaso ngokujikeleza ivili elikhulu lemikhosi. Ivili leThamsanqa libonwa kwiimarike ezingama-8 ezigubungela i-208% ye-USA
INevis yinxalenye yeFederal yaseSt. Kitts kunye neNevis kwaye ikwiZiqithi zeLeeward zeWest Indies. Imile ngokuma kunye nentaba yentaba-mlilo kwiziko layo elibizwa ngokuba yiNevis Peak, isiqithi yindawo yokuzalwa kukayise waseMelika, u-Alexander Hamilton. Imozulu iyaqheleka kuninzi lonyaka ngamaqondo obushushu asezantsi ukuya phakathi ko-80s ° F / phakathi kwe-20-30s ° C, umoya opholileyo kunye namathuba asezantsi emvula. Ukuthuthwa komoya kuyafumaneka ngokulula ngonxibelelwano oluvela ePuerto Rico, naseSt.
Iindaba ezingakumbi malunga neNevis